Jabuuti: Xukuumada Jabuuti ayaa ka Jawaabtay Dacwad ay ku soo oogtay Maxkamad ku Taala Dalka Ingiriiska. – Samawadenews
Jabuuti: Xukuumada Jabuuti ayaa ka Jawaabtay Dacwad ay ku soo oogtay Maxkamad ku Taala Dalka Ingiriiska.
Maayarkii Hore ee Boorama oo Beeniyey Musuq Lagu Eedeeyey.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo Boosaaso lagu soo dhaweeyey.
Cabdixakin Maxamed -Dhoobo Daareed oo isaga baxay magaalada Garoowe.
Cabdixakiin Dhoobo daareed oo wata ciidamo iyo gaadiid dagaal oo taageersan ayaa xalay gaaray degmada Xingalool ee gobolka Sanaag, waxaana lagu waddaa in uu sidoo kale maanta gaaro degaano ka … Read More
Asr 2:09 PM
Magrib 4:37 PM
[Al-Haj (the Pilgrimage): 52]